Arzantina: nandresy tamin’ny fifidianana tsy nahasarika I Kirchner · Global Voices teny Malagasy
Arzantina: nandresy tamin’ny fifidianana tsy nahasarika I Kirchner
Voadika ny 02 Novambra 2007 15:12 GMT
Vita ny fifidianana tao Arzantina. Misy milaza fa io angamba ny fifidianana tsy nahasarika indrindra hatramin’ny niverenan’ny demokrasia tamin’ny taona 1983. Roa andro mialoha ny fifidianana anefa dia tsy misy marika amantarana izany teny an-dalana ankoatra ny afisy vitsivitsy. Tsy nandray anjara tamin’ny raharaha ny ankamaroan’ny olom-pirenena, nefa tsy midika izany fa tsy hisy fiantraikany fihetsika izany any aoriana any. Raha ny marina dia mirotsaka an-tsehatra amin’ny lohahevitra ny bolongana (blaogy) ao an-toerana.
Tsy banga tsy akory ny fifanoheran-kevitra. Maro ny tolo-bolongana manakiana mafy dia mafy ny governemantan’i Nestor Kirchner sy ny ho mpandimby azy dia Ramatoa Cristina Kirchner izany. Raha jerenao ny vokatra ofisialy dia mazava dia mazava tokoa ny fandresena noho ny vokatra azony izay nahatratra ny 45%, manaitra tokoa ny fetr’isa sahal amin’izany. Raha raisina ihany koa ka heverina ny toerana nahavitsy mpifidy an’i Cristina izay tany amin’ny tanan-dehibe, izay fonenan’ny maro amin’ny mpampidi-bolongana (mpibilaogy na gilaogera), dia ho azon’izay mahatsikaritra izany avy hatrany ny fahasamihafan’ny vokatra sy ny hevitry ny mpampidi-bolongana.
Raha vao nandre ny ako nanaraka ny valim-pifidianana fotsiny dia injany fa fanamelohana ny fandresen’ny antokon’ny mpitondra no hita tamin’ny ankapobeny tao amin’ny Twitter. Nisy aza moa ny nanangana bolongana mamporisika tsy hifidy Cristina, tahaka ny No voto a Cristina [ES] (Tsy hifidy Cristina aho). Etsy andanin’izany, mazava loatra, dia mampiasa ny fitaovan’ny web ihany koa ny ao amin’ny fanohanana araka izay hitanao ao amin’ny Sumate a Cristina [ES] (Miaraha amin’i Cristina), sady misy sary ao amin’ny Flickr miaraka aminy, ary eo koa ny filazana vaovao vao milatsaka avy amin’ny Twitter ary misy aza moa ny mpanohana manome toro-hevitra amin’ny alalan’ny MSN Messenger.
Raha tsy dia nisy zava-nanaitra loatra talohan’ny fifidianana dia somary nisomaritaka kosa izany rehefa tonga ny andro fandrotsaham-bato. Nisy ny nitatitra fa misy toerana tara ny fisokafan’ny biraom-pifidianana noho ny tsy fahampian’ny mpiandraikitra ny fifidianana. Nisy ny fiandrasana ela raha te-hifidy, nisy ny vatom-pifidianana tsy hita tany amin’ny birao, fa tsy tratran’izany kosa ny an’ny fitondrana. Maro tamin’ny antoko politika no tsy ampy mpanara-maso hahasahana ny biraom-pifidianana rehetra. Hita avy amin’izany lesoka izany fa mila havaozina ny fomba fifidianana hahatsara ny amin’ny manaraka.
Raha te-hijery ny tsikera sy ny hasiakan’ny hevitra sasany dia jereo ity iditra ao amin’ny eBlog [ES] mitondra ny lohateny hoe “El show de Cristina”[ny fihetsiketsehan’i Crisitina] ity. Ao no ahitana ny hevitra avy amin’ny mpanohitra ny fitondrana milaza momba ny fangalaram-bato avy amin’ny mpiasan’ny governemanta dia lazaina avy eo fa avy amin’ny sitrapon’Andriamanitra ny valim-pifidianana.Etsy ankilany kosa indray dia misy ireo manakiana ny mpampidi-bolongana (bilaogera) sy mpandray anjara ho tsy mahatakatra ny toe-draharaha ka mamaly hoe “ tsy mampiasa Nokia N73 na manana Bolongana ny mpifidy an’I Cristina”. Misahana ny hoavin’I Arzantina ny halalin’izany hatsam-pisarahana izany, nefa mampiseho ny endri-piadian-kevitra araka ny Peronisma sy ny vahana azony eo amin’ny tontolo politika ao an-toerana.
Indreto misy iditra mahaliana vitsivitsy ahitana ny adi-hevitra ao an-toerana momba ny fifidianana:Al final son todos iguales (Mitovy daholo ihany amin’ny farany): ao amin’ny Fresco y Batata [ES]. Dia efa misy hevitry ny filoha ho avy tsikerain’Italo Daffra sahady:
la electa presidenta de la Argentina dijo la semana pasada que
el periodismo no debe publicar temas que perjudiquen la imagen del país. Lo que sorprende de esa frase es la similitud con lo que propugnaba la última dictadura, que ejercía la censura basado en que se quería dañar la imagen de la Argentina. Tan diferentes, tan parecidos.
Niteny ny filoha voafidy Arzantina tamin’ny herinandro fa tsy tokony hikasika lohahevitra manaratsy ny sarin’ny firenena ny fanaovan-gazety. Nahataitra ahy sy nanohina ahy ny fitovian’ny fomba fiteniny sy izay nolazain’ny fitondrana jadona tamin’ny androny ka nametrahana ny sivana mifototra amin’ny fanakanana ny « fanaratsiana ny endriky ny firenena ». Sahala fa tsy mitovy.
La gran revelación de Morales Solá (Ny fanapoirana ny marina nasehon’i Morales Sola): Darío Gallo, avy amin’ny Bloc de Periodista [ES], izay nananihany sy nampisy fifandirana tao amin’ny bolongany (lahatsoratra amin’ny blaogy) mikasika ny lesoka amin’ny tendan’i Cristina Kirchner izay nabaribariny tamin’ny sary rahateo.
El error de Carrió (Ny fahadisoan’i Carrio): Nosoritan’i Juan Tapiola fa nisy fahadisoan-tetika politika nataon’i Elisa Carrio, kandidan’ny Coalicion Civica, izay nahazo ny toerana faharoa tamn’ny fifidianana.
Creo que Carrió ha cometido un error estratégico básico. Elisa se ha posicionado en el ciudadano argentino como la opción de la ética y la honestidad. Muchos años de denuncias públicas y una conducta impecable le han capitalizado en Carrió este posicionamiento tan fuerte en Argentina…Sin embargo el posicionamiento de Elisa es el de una idealista y no necesariamente el de una gestora. Y aquí es donde creo que ha cometido el error… Pero la gestión y el día a día la debería haber delegado a un personaje con una fuerte imagen de liderazgo en el ámbito de la administración
Diso paika i (Elisa) Carrió araka ny eritreritro. Efa nametraka ny tenany ho safidim-bahoaka ho amin’ny fahamarinana ho amin’ny teny sy ny asa ary ny fitsipi-pitondrantena i Elisa. Mampahazo vahana be dia be an’i Carrió eto Arzantina ny fitondran-tena tsy azo kianina sy ny laza azony nandritra ny taona maro. Na izany aza dia tsy voatery ho amin’ny fitantanana no fijery nomen’i Elisa ny tenany fa toy ny mpanofinofy ihany. Ary izay no hitako ho fahadisoany… Olona manana vina mahery sy matotra amin’ny fitantanana no tadiavina eny anivon’ny fampandehanan-draharaha isan’andro sy ny fitantanam-panjakana.Jodete: Milaza ny fahavitsian’ny isan’ny mpifidy, lohahevitra mikasika ny olam-pikarakarana ny fifidianana kokoa, ary bolongana (blaogy) nahazoana ny karazam-panehoan-kevitra maro indrindra.
El gobierno que elegimos (Ny governemanta safidiantsika) kosa mitantara ireo tetika maharikoriko nefa anatin’ny ara-dalàna tsikaritr’ity governemanta ity.
La Nueva 2º Fuerza, la CC (Ny Vaovao Hery faharoa, ny CC): bolongan’ny (blaogin’ny) mpanohana an’i Elisa Carrio supporters manadihady ny valim-pifidianana.
Nisalasala tamin’ny fampidirana bolongana (blaogy) nitondra lohateny hoe Preguntas sin respuesta (Fanontaniana tsy nisy valiny) ny tao amin’ny Uno más del montón [ES] rehefa maro ny olam-pitarainana re nandritra ny fotoam-pifidianana.
Misy ny lisitry ny blaogy manohana an’i Cristina Kirchner ao amin’ny Sumate a Cristina [ES] (Miaraha amin’i Cristina) saingy indrisy moa fa maro amin’izy ireo no tsy noankotrihina (na hoe tsy namoaka vaovao intsony) taorian’ny fifidianana.